D V परेर अमेरिका गएका भरत अब कहिल्यै नफर्किने गरी अस्ताए !!
अलबिदा भतिज भरत ओली । यो दु:खद खबरले स्तब्ध छु । केहि दिन अघि हाम्रो कुरा भएको थियो । सबै ठिकठाकै थियो तर अकस्मात नि’धनको खबरले म’र्माहत बनायो । जिन्दगी भन्नु नै के रहेछ र ? थाहा छैन कुन दिन कुन रात अन्तिम हुने हो । विश्वास लागेन र अमेरिका फोन गरें, उसको साथीले
हो नि’धन भयो भन्यो। अचम्म लाग्यो अझै विश्वास गर्न सकि रहेको छैन । भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली भतिज ! दिवंगत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना । – अमेरिका मा नि’धन भएका भरत ओली लाई सम्झिदै उनका अंकल ले लेखेको यो भावुक फेसबुक स्टाटस
यो पनि – कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ फेरि अस्पताल भर्ना भएका छन्। अचानक उनको मुटुमा समस्या आएपछि उनलाई शनिबार बिहान काठमाडौंको गंगालाल अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनलाई शुक्रबार राति देखि छाती दुखेको थियो।
मदनकृष्णमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अझै पनि पोजिटिभ देखिएको छ। जसकारण पनि उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएको हुनसक्ने डाक्टरहरूले बताएका छन्। साथै, ब्लड प्रेसर पनि तलमाथि भएपछि उनलाई शनिबार बिहानै अस्पताल लगिएको थियो। आइतबार उनको एन्जियोप्लास्टी गरेर स्टेन्ट हालिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार आइरहेको छ।
२०७८ माघ ५, बुधबार प्रकाशित0Minutes 404 Views